Cunista 2 Xabbo Oo Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Cudurro Badan - Daryeel Magazine
Cunista 2 Xabbo Oo Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Cudurro Badan
Cunista muuska ee maalin kasta waxa ay u leedahay faa’iidooyin aad u badan jidhka bini’aadamka, iyada oo midhahan ay ku jiraan nafaqooyin aad u weyn iyo maadooyinka loo yaqaano “antioxsidenter” ka ee ka hortagga dhaawacyada soo gaadha unugyadda.
Waxa sido kale midhahani ay xoojiyaan habka difaaca jidhka iyo wanaajinta dheef-shiidka,sidoo kale waxa ay kaa caawiyaan ka hortagga ah tiro badan oo ah cuduro iyo xanuunada caafimaadka ah.
Waxaa xusid mudan in doorashada 1 muus ah oo aad u bislaaday in ay kordhinayso in uu jidhku la kulmo TNF ama Tumor necrosis factor ee caan ku ah awooddeeda la dagaallanka fiditaanka unugyada aanan nidaamsanayn ee noqon kara kansarka. Maadada TNF sidoo kale waxa ay waxtar u leedahay wanaajinta xidhiidhka ka dhexeeya unugyada kala duwan ee habka difaaca jidhka.
Sida laga soo xigtay daraasad ay sameeysay jaamacada University of Tokyo waxa lagu sheegay in muuska bislaaday ee qoloftiisa ay ku jiraan dhibcaha madow ee tirada badan in uu hodan ku yahay maadada TNF-Alpha, sidaa daraadeed waxa uu kordhinayaa 8 goor in ka badan marka la barbar dhigo muuska dooga/akhtarka ah shaqeeysiinta nidaamka difaaca jidhka.
Maxay yihiin dhibaatooyinka caafimaad ee lagu daweyn karo cunista 2 muus ah maalin kasta?
1-Calool ololka: Cunista muusku waxa ay ka ciyaartaa door weyn isbadelka heerka acid ka, taas oo keenta xanuunka/laxowga.
2-Dhiig-karka: Daraasad ay sameeysay Kasturba Medical University oo India kutaala ayaa daaha ka fayday in cunista 2 xabadood oo muus maalin kasta muddo todobaad ah ay kaa caawin karto hoos u dhiga heerka cadaadiska dhiiga 10% maxaa yeelay waxa uu hodan ku yahay maadada potassium ka, taas oo ka caawisa hoos u dhigista cadaadiska dhiigga iyo wanaajinta shaqooyinka wadnaha.
3-Tamar darada: Sababtoo ah in muuska ay ku jiraan vitaminada C, B6 iyo B9 iyo macdanta potassium, magnesium, naxaasta iyo birta iyo carbohydrates ka,waxa uu jidhka siinaya tiro badan oo nafaqooyinka uu u baahan yahay ah si uu si fiican ugu shaqeeyo.
4-Dhiig-yarida: Muuska waa mid ka mid ah cuntada ugu waxtarka badan ee lagula dagaalamo dhiig-la’aanta (anemia) maxaa yeelay waxa uu hodan ku ah birta,sidaa daraadeed waxa uu kordhiyaa soo saarka maadada hemoglobin waxana uu xoojiya qulqulka dhiigga.
5-Naburada: Muuska ayaa waxa loo arkaa in uu yahy il muhiim ah oo ka hortagta bakteeriyada, iyo kartida uu u leeyahay in uu yareeyo heerka acid ka ee caloosha taasoo ka dhigaysa in uu qabto kaalin raad leh ee xoojinta gidaarada/darbiyada caloosha iyo yareeynta bararka.
6-Niyad-jabka/ murugada: Muuska ayaa waxa loo arkaa in uu hodan ku yahay maaddada (Balthriptovan) taasoo daaweeynta niyad-jabka wax ku ool u ah,waana protein ka jidhku u badilo serotonin oo ah hormon ka raaxada iyo hurdada,sido kale muuska waxa uu kaa caawiyaa la dagaalanka niyad-jabka iyo isbadbadilka niyadda.
7-Mudada caadada:Muusku waxa uu ka caawiyaa wanaajinta niyaddooda iyo xasiloonida haweenka caadada leh ama kujira mudada dhiiga. Cunista muuska bislaaday oo hodan ku ah vitamin B6 waxa uu ka caawiyaa haweenka deggenaanshaha mudadan bisha ah.
8-Heerka-kuleeylka ee jidhka: Muuska ayaa waxa loo arkaa in uu yahay khudrad firfircooni galin leh taasoo ka caawisa hoos u dhiga heerka-kuleeylka jidhka. Waxa muuska lagu tilmaamay in haweenaydu inta ay uurka leedahay iyo mudada dhalmo-dayska menopause uu ka habeeyo is baddilada heerka kuleeylka ee jidhka ku jira iyo in uu yareeyo dareenka gubashada ah.
Cunista Xabad Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Xanuunada Indhaha Cunista Xabad Avocado Ah Maalintii Waxay Kaa Badbaabin Kartaa Xanuuno Badan Cunista Shukulaatada Madow Waxay Kaa Difaaci Kartaa Macaanka Iyo Cudurrada Wadnaha Maxaa Ku Dhacaya Jidhkaaga Haddii Aad Maalin Kasta Cunto 3 Xabbo Oo Timir Ah??